Imidlalo nemidlalo eGibhithe lasendulo | Ukuhamba kwe-Absolut
Isabella | | I-Egypt
Emasikweni asendulo aseMedithera, umkhuba wezemidlalo wawuhlobene kakhulu nemikhosi yenkolo nokungcebeleka. Kodwa-ke, umqondo wezemidlalo eGibhithe lasendulo uhluke kakhulu kulokho oyikho manje.
Eqinisweni, abanye abacwaningi bagcina ukuthi bazijwayeza ukuzivocavoca umzimba hhayi ezemidlalo ngoba bengenalo ngisho igama lokubhekisa kulo msebenzi. Ngakho-ke wawunjani umdlalo eGibhithe lasendulo?
1 Wawuyini umdlalo eGibhithe lasendulo?
2 Ngubani owayedlala imidlalo eGibhithe lasendulo?
3 Ingabe abesifazane badlala imidlalo?
4 Ingabe ezemidlalo zazibhekwa njengombukiso eGibhithe lasendulo?
5 Wawuyini umkhosi kaFaro?
6 Ngabe wayekhona uFaro owayegqamile njengomdlali?
7 Iyiphi indima edlalwa yiNayile kwezemidlalo eGibhithe?
8 Ngabe kwakukhona unkulunkulu ohlobene nezemidlalo ezinganekwaneni zaseGibhithe?
Wawuyini umdlalo eGibhithe lasendulo?
Isimo sezulu sezwe besikulungele kakhulu ukuchitha isikhathi esiningi ngaphandle futhi lokho bekuvuna umkhuba wokuzivocavoca umzimba, kepha ngaphandle komqondo wokuba ngumdlalo njengoba ukhulelwa njengamanje. Kodwa-ke, bebazi kahle ubudlelwane obuphakathi kokuvivinya umzimba nethoni yemisipha enhle.
Ngokuyisisekelo, ezemidlalo eGibhithe lasendulo zaziqukethe imidlalo yangaphandle kanye nokulwa kwezempi nokuqeqeshwa kokulwa. Kwezinye izindawo zemivubukulo kwatholakala amathuna anemifanekiso emele ubuciko bempi obufana nekarate nejudo. Kutholakale umfanekiso wezithombe ethuneni laseJeruef lapho abantu abaningana bevela khona endaweni yokulwa sengathi bekuwumdlalo wesibhakela.
Omunye umdlalo eGibhithe lasendulo owawujwayele ukwenziwa kwezemidlalo. Kwakumayelana nezinhlanga ezincane ukusuka kwelinye iphuzu ukuya kwelinye ukubona ukuthi ngubani osheshayo. Ukuba ngaphandle kakhulu, ukugijima noma ukubhukuda kwakuyimisebenzi ejwayelekile kakhulu kubo.
Omunye umsebenzi wezemidlalo wemvelo ongavamile owenziwa abaseGibhithe ukuzingela izimvubu, amabhubesi noma izindlovu. Kukhona izindaba ezithi ufaro Amenhotep III weza ukuzingela izinkunzi ezingama-90 ngosuku olulodwa nokuthi u-Amenhotep II wakwazi ukubhoboza isihlangu sethusi ngokudubula imicibisholo emihlanu ngomnsalo ofanayo. Mayelana nabantu, nabo babezingela kodwa kwakungumdlalo omncane njengokuzingela amadada emfuleni.
AbaseGibhithe baphinde bahlela imincintiswano yezinqola zamahhashi kanye nemincintiswano yemicibisholo, okwakuwumdlalo omuhle kakhulu ngaleso sikhathi.
Ngubani owayedlala imidlalo eGibhithe lasendulo?
Ezinkulungwaneni zeminyaka eyedlule, iminyaka yokuphila ibingeyinde kakhulu futhi eGibhithe ayengeqi eminyakeni engama-40. Kungakho abantu ababeprakthiza ezemidlalo babebancane kakhulu futhi bathambekele ekuzivocavoca umzimba.
Ingabe abesifazane badlala imidlalo?
Noma ungacabanga ngenye indlela, abesifazane baseGibhithe lasendulo babedlala imidlalo kepha bekungeyona imisebenzi ehlobene nomjaho, amandla noma amanzi kepha okwenziwa yi-acrobatics, contortionism nokudansa. Lokho kusho ukuthi, abesifazane babambe iqhaza elibalulekile emadilini azimele nasemikhosini yezenkolo njengabadansi kanye nama-acrobat. Namuhla singasho ukuthi laba besifazane benze into efana nokuzivocavoca okunesigqi.
Ingabe ezemidlalo zazibhekwa njengombukiso eGibhithe lasendulo?
Ngokungafani nezinye izizwe ezinjengeRoma noma isiGreki, eGibhithe ezemidlalo azizange zikhulelwe njengombukwane. Ngemifanekiso nezethulo ezitholakale ekumbeni kwemivubukulo, akukwazanga ukuthola izinkomba zezindawo ezinkulu noma izimo ezihlobene nemibukiso emikhulu yezemidlalo.
Lokhu kusho ukuthi eGibhithe lasendulo yayingekho into efana neMidlalo yama-Olimpiki kepha kunalokho AbaseGibhithe bancintisana emkhakheni wangasese futhi bakwenzela nje ukuzijabulisa. Kwakungekho ngisho nezethameli.
Kodwa-ke, ngaphandle kokunye, bekunomkhosi owenziwe ngoFaro futhi ongathintana ngandlela thile nomcimbi wezemidlalo. Lo mkhosi ububanjelwe lapho amakhosi ebuse iminyaka engamashumi amathathu, ngakho-ke bekungumkhosi ongajwayelekile ngenxa yesikhathi esiphansi sabantu ababephila ngaleso sikhathi.
Wawuyini umkhosi kaFaro?
Kulo mkhosi wokugubha iminyaka engama-30 yokubusa kukaFaro, inkosi kwakudingeka idlule endaweni ebiyelwe eyisikwele ngohlobo oluthile lomjaho wenhloso okwakuwukukhombisa abantu bayo ukuthi usemncane futhi unamandla anele okuqhubeka nokubusa we bafowethu.
Umkhosi wokuqala walolu hlobo wawugujwa ngemuva kweminyaka engama-30 yokubusa futhi njalo eminyakeni emithathu ngemuva kwalokho. Isibonelo, kuthiwa uFaro Ramses II washona eneminyaka engaphezu kwamashumi ayisishiyagalolunye, ngakho-ke wayezoba nesikhathi esanele sokwenza imikhosi eyahlukahlukene, waba yinto engafani nesikhathi.
Ngabe wayekhona uFaro owayegqamile njengomdlali?
UFaro Ramses II wayephila isikhathi eside kakhulu futhi wabamba iqhaza emikhosini eminingi-yokugubha usuku kodwa kwaba njalo U-Amenhotep II owayethathwa njengesibonelo senkosi yezemidlalo, ngokubuka ngobuhle noma ngokomzimba.
Iyiphi indima edlalwa yiNayile kwezemidlalo eGibhithe?
UMfula iNayile wawungumgwaqo omkhulu ezweni ngaleso sikhathi, lapho izimpahla zazithuthwa khona futhi abantu behamba. Ngenxa yalokhu, kwakusetshenziswa izikebhe zokugwedla nokuhamba ngomkhumbi, ngakho-ke abaseGibhithe babelungile kulesi siyalo.
Kungakho emfuleni iNayile babengahlela umncintiswano othile wangasese, kungaba ngesikebhe noma ngokubhukuda, kepha kwakungeyona imiqhudelwano yomphakathi lapho owinile anikezwa khona.
Mayelana nokudoba, kugcinwa imibhalo ekhombisa lokho ENile bekukhona nemincintiswano yangasese yokubheka ukuthi ngubani okwazi ukubamba kakhulu..
Ngabe kwakukhona unkulunkulu ohlobene nezemidlalo ezinganekwaneni zaseGibhithe?
EGibhithe lasendulo kwakukhona onkulunkulu cishe kuzo zonke izindawo zokuphila kepha okuxakayo hhayi ezemidlalo ngoba, njengoba ngishilo phambilini, ngaleso sikhathi umdlalo wawungakhulelwa njengoba senza namuhla.
Kodwa-ke, abaseGibhithe uma bekhulekela onkulunkulu abasesimweni sezilwane ngezimfanelo ababebanikezwe zona. Okusho ukuthi, onkulunkulu abanomzimba wenyoni babethandwa ngenxa yokuguga namandla abo okundiza, kuyilapho onkulunkulu abanesimo senkunzi benziwa ngamandla alezi zidalwa, njengoba kwenzeka kwezinye izilwane njengezingwenya.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Imidlalo nezemidlalo eGibhithe lasendulo